ओस्कर अवार्डमा साउथ कोरियाको फिल्म ‘प्यारासाइट’ उत्कृष्ट घोषित - २७ माघ २०७६, NepalTimes
ओस्कर अवार्डमा साउथ कोरियाको फिल्म ‘प्यारासाइट’ उत्कृष्ट घोषित
साउथ कोरियाको फिल्म ‘प्यारासाइट’ ओस्कार अवार्डमा उत्कृष्ट फिल्म घोषित भएको छ । अमेरिकाको लस एन्जेलिस शहरको डल्बी थिएटरमा भएको संसारको सबैभन्दा प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड ९२ औं ओस्कार अवार्डमा ‘प्यारासाइट’ उत्कृष्ट फिल्म घोषित भएको हो ।
फिल्मले बेस्ट फिल्मसँगै बेस्ट ओरिजिनल स्क्रिनप्ले विधामा समेत अवार्ड पाएको छ । निर्देशक बोङ जोन हो निर्देशित फिल्म ‘प्यारासाइट’ दुई परिवारको कहानीमा आधारित भएर बनेको हो । यो फिल्ममा आर्थिक रुपमा सम्पन्न एक परिवार र एक गरिब परिवारबीच साउथ कोरियाको क्लास स्ट्रग्ल देखाइएको छ । यो फिल्मले अस्कारमा बेस्ट फिल्मसँगै, बेस्ट डाइरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रिनप्ले र बेस्ट इन्टरनेशनल फिल्मको अवार्ड पनि जित्न सफल भएको छ ।
त्यस्तै, अस्कार अवार्डमा अभिनेता वकिन फिनिक्सले फिल्म ‘जोकर’ बाट बेस्ट एक्टरको अवार्ड जितेका छन् । वाकिन यो अवार्डका लागि सबैभन्दा प्रवल दावेदार मानिएको थियो । फिल्म ‘जुडी गार्लेन्ड’ मा आफ्नो परफर्मेन्सबाट दर्शकको मन जितेकी अभिनेत्री रीन ग्लेवेगरले बेस्ट एक्ट्रेसको अवार्ड जित्न सफल भएकी छन् ।
त्यस्तै २औं अस्कार अवार्डमा ‘वन्स अपन अ टाइम इन हलिउड’ बाट ब्राड पिट उत्कृष्ट सहायक अभिनेता घोषित भए । सिनेमाटोग्राफर रोजर डिकिन्सले ‘१९१७’ बाट बेस्ट सिनेमाटोग्राफरको अवार्ड जिते । साम मेन्डेसको यो फिल्मले अस्कारमा तीन अवार्ड जितेको छ । बेस्ट सिनेमाटोग्राफीसहित बेस्ट भिजुएल इफेक्ट्स र बेस्ट साउन्ड मिक्सिङमा फिल्मले अवार्ड जितेको हो ।
राष्ट्रसङ्घको उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीकाे सम्बोधन : ‘गरिबी मुख्य चुनौती’
इजरायलले ५ सय नेपाली नर्स लैजाने, तलब १५ सय अमेरिकी डलर
विद्यार्थी बोलाउने होइन शिक्षक टोलमै पठाउने
कोरोनासँगै बढ्यो महिला हिंसा
मोरङमा ४१ सहित प्रदेश १ मा आज ८५ संक्रमित थपिए, ३८ जना डिस्चार्ज
आज थपिए १,३१३ संक्रमित, १,४५५ जना डिस्चार्ज
मुक्तिको बाटो भनेको लोकतन्त्र हो त्यसको विकल्प छैनः सभामुख सापकोटा (अन्तर्वार्ता)
घोडाघोडी तालको आकर्षणमा कसरी लोभिए पर्यटक ?
एसिड आक्रमण सम्बन्धी अध्यादेश पारित,एसिड छ्यापे २० वर्ष कैद
बाँकेमा थप एक कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु
जनताको भन्दा किन चीनको विश्वास गर्छ सरकार ?
आइपीएल: पन्जाबले बेंगलोरलाई ९७ रनले हरायाे, राहुलको कीर्तिमान